Argamatti haalata guuti kakaasa. Akeektuun hantuutee mallattoo addaatti jijjiramu, sakkata'insa man'ee dursaa ilaaluuf man'ee kamiyyuu cuqaasuu dandeessa. Haalata kana keessaa bahuuf, Cufiinsaa dhiibi ykn ajaja Dhuma Haalata Guuti baafata halqara keessaa cuqaasi.
Haalata kana si'aa jalqabaaf yoo waamta ta'ee, faankishiinin Haalata Guuti ajaja Sakkatta'ii Dursaa waliin walfakkaata.Dirqalaalee dabalata haalata guuti fi halaata kana bahii filachuuf bafata halqara fayyadami.
Title is: Haalata Guuti